Ivenkile yeevenkile - iShenzhen Radiant Technology Co., Ltd.
Umboniso obonisa ukuguquguquka kwe-LED
Casino LED Display
Isiboniso se-LED esisigxina
Umhle umdibaniso we-LED
Isibonisi se-Indoor yangaphakathi
Umboniso wangaphandle we-LED
Icandelo leMidlalo yeKhasino kunye neMidlalo
Large-format screens LED yinxalenye ebalulekileyo ye-Digital Out of Home landscape
Basebenzisa nomongo, iqonga yedijithali ukuzisa iibrand ebomini senginginya nodibaniso nokuba benza izaziso zentengiso kunye abathengi engqondweni efanelekileyo ukuthenga.
Kukho iqela lemiba ezivulekileyo kwiindawo ezinqwenela ukufaka i screen LED kunye ezininzi iinkonzo adi baye bakhetha umzekelo kobunini sikrini.
Screen ubunini inikeza ityala esinyanzelisayo isibonelelo-mali lwexesha elide kwaye Iindawo zemicimbi ngemiyinge emincinci kunye nabanini zabo kwindawo yorhwebo strong apho izivumelwano eendaba kunye iingeniso zentengiso bakhathazekile. Nangona iindleko screen yentsimbi ayikho zingabalulekanga, inzuzo awafunyanwa iinkonzo xa ucacise kwaye bathenge zabo eendaba LED screen avulekela okungenelela. Abaninzi baye ifunyanwe kwakhona iindleko iskrini sabo kwisithuba nyanga 12-18.
Ifaka i kulomthombo engaphezulu
Ukuthengisa isithuba nentengiso kwi Shopping Centre Screen yakho LED inokuba kulomthombo enkulu. Zemenyu LED ezinokuliqhekeza ukubonisa izibhengezo ezininzi ukuvumela ukuba athengise isabelo buso kwaye sigcina isixhobo yomkhankaso zakho. Ezinkulu zemenyu Ifomati Feature kwiindawo ezineevenkile iindawo ezinabantu abaninzi uzobe ezininzi amehlo oku kuthetha amaxabiso imali ukuze isithuba entengiso.
Ifuna abaqeshi ngaphezulu
Ukuba abaqeshi bakho ezinokubakho sikhetha phakathi ezineevenkile ezininzi a Format ezinkulu LED Screen kwiziko lakho ukwenza umahluko. On top of umfanekiso iwandlale, ukukwazi emarikeni isakhono kwivenkile lwakho Kumbindi emi kuyo inika ithuba elikhulu. Idibanisa a ezamahala zexesha elifutshane isabelo isiboniso nazo zinokusetyenziswa ukufumana kubalimi ezinokwenzeka phezu komgca
Transparent LED screen is suitable for th...
How does transparent LED display go to th...
How to install transparent LED display in...
5 common application places for transpare...
Overview of LED display applications in e...
Kumgangatho 3, kwiSakhiwo i-D, kwiYunithi yeNdawo yeTekhnoloji ye-Yisong, uNombolo9. Jiejiabao Road, Baoan Discict, Shenzhen City, China
Tsalela ngoku: +86 755 83193425